एआरटीले लम्ब्यायो संक्रमितको जीवन | चितवन पोष्ट दैनिक
एआरटीले लम्ब्यायो संक्रमितको जीवन
२०७० फाल्गुन १०, शनिबार ०३:०० गते
भरतपुर । एचआईभी संक्रमितको जीवन लम्ब्याउन दिइने ‘एआरटी’ सेवाबाट ६ वर्षमा ४६८ जना लाभान्वित भएका छन् । चितवनमा भरतपुर अस्पतालले एएचएफ नेपाल नामक संस्थाको सहयोगमा सन् २००७ देखि एआरटी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अस्पतालमा सन् २००७ मा एआरभी सेन्टर सञ्चालन भएयता ९८८ जना संक्रमितहरु सम्पर्कमा आएको एएचएफको भरतपुर अस्पतालका कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सापकोटाले जानकारी दिए । जस्मा ५३० पुरुष, ३७८ महिला र ८० जना बच्चाहरु रहेका छन् ।
एआरटीका कारण भाइरसको संख्या नियन्त्रणमा आउँछ । जस्का कारण संक्रमित भएकाहरु लामो समयसम्म एड्स हुने अवस्थामा पुग्दैनन् । संक्रमित सबैलाई सुरु मै एआरटी सेवा भने दिइँदैन । परीक्षण र अवस्था हेरेर एआरटी सुरु गरिन्छ ।
‘समान्यतया रक्त परीक्षण हुन्छ । रक्त परीक्षणमा सिडी फोरको मात्रा हेरिन्छ । सिडी फोर ३५० भन्दा तल छ भने हामी एआरटी दिन सुरु गर्छौँ’ भरतपुर अस्पतालका चिकित्सक डा.उन्नत श्रेष्ठले भने । एआरटी लिन सुरु गरेपछि जिन्दगीभर लिनुपर्छ ।
तीन वर्षअघिसम्म सिडी फोर दुई सयभन्दा तल गएपछि एआरटी सुरु हुन्थ्यो । अहिले त्यसमा परिमार्जन गरिएको चिकित्सक श्रेष्ठले बताए । ‘सामान्यतया संक्रमित भएको लगभग आठ १० वर्षपछि एआरटी सुरु गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ’ चिकित्सक श्रेष्ठले भने ।
एआरटी सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने गरेको छ । संक्रमित गर्भवतीलाई भने सिडि फोर नहेरी एआरटी दिन सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै श्रीमान, श्रीमतीमध्ये एकजना एचआईभी संक्रमित छ भने त्यसो अवस्थामा पनि संक्रमितलाई एआरभी दिन सिडी फोर नहेर्ने उनले बताए ।
क्षयरोग लागेको संक्रमित र दुई वर्षभन्दा तलको संक्रमित बच्चालाई पनि सिडी फोर नहेरी एआरटी दिने गरेको डा. श्रेष्ठले जानकारी गराए । एआरटी दिन थालेपछि विस्तारै विस्तारै भाइरस कम हुँदै गएर ७० वर्षपछि निर्मुल हुने वैज्ञानिकहरुको अनुमान रहेको छ ।
एआरटी सुरु गरेपछि खानपानमा केही थप पहरेज गर्नुपर्छ । जाँडरक्सी खानु हुँदैन । औषधी नियमित र तोकिएकै समयमा खाने गर्नुपर्छ । अहिले सामान्यतया १२ घण्टाको फरकमा खाने औषधीहरु दिने गरिएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
एआरटी सेन्टरमा सम्पर्कमा आएकामध्ये सन् २००७ यता २०१४ को जनवरीसम्म ७८ जनाको निधन भएको सापकोटाले जानकारी दिए । जसमध्ये ५५ जना पुरुष, २० जना महिला र तीनजना बालबालिका रहेका थिए ।
नेपालमा २२ हजार ९४४ जनालाई एचआइभी संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । यो गएको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हो । रक्त परीक्षण गराउन आएकाहरुबाट यो संख्यामा एचआइभी संक्रमितहरु भएको पत्ता लागे पनि अझ धेरै संक्रमितहरु परीक्षण गराउन आइनपुगेको अनुमान छ ।
असुरक्षित यौन सम्पर्क एचआइभी संक्रमणको मुख्य कारक मानिएको छ । नेपालमा यौन कर्ममा लागेका महिलाका ग्राहकहरु यसबाट धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ । कुल संक्रमितमध्ये नौ हजार १२६ जना यौनकर्मीका ग्राहकहरु रहेका छन् ।